Sharciga cusub ee kordhinta dammaanadda ayaa saameyn badan ku leh Apple (iyo inta kale). | Waxaan ka socdaa mac
Sharciga cusub ee kordhinta dammaanadda wuxuu saameyn badan ku leeyahay Apple (iyo inta kale).
Isbaanishku waxay qaaday talaabo horay loo qaaday kadib markii la ansixiyay sharci cusub oo nidaaminaya, iyo waxyaabo kale, kordhinta shuruudaha dammaanadda alaabada cusub. Waxay hadda ku jiraan laba sano laakiin waxaa loo kordhin doonaa seddex. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah sharcigan cusub oo saameyn ku yeelan doona Apple iyo sidaas darteed dadka isticmaala dhamaadka. Haddii aad iibsato Mac ama iPad laga bilaabo 2022 damaanadda waxaa loo kordhinayaa ilaa 3 sano iyo soo saaraha ayaa looga baahan doonaa inuu la kulmo waajibaadka cusub.
Apple waxay hadda ku qasbanaan doontaa inay bixiso ugu yaraan seddex sano oo dammaanad ah oo ku saabsan alaabada lagu iibiyo Spain. Wasaaradda Macaamiisha ayaa dhawaan ansixisay heer qaran oo ilaalin macaamiisha. Ka dib markii lagu daabacay BOE, kaSharciga Guud ee Difaaca Macaamiisha iyo Isticmaalayaasha'waa la cusbooneysiiyey si loogu daro tallaabooyinka awaamiirta Yurub. Xeer cusub oo kordhiya caymiska alaabada laga bilaabo laba illaa saddex sano.
Laakiin wax badan ayaa jira. Ka badan.
1 Dammaanad saddex sano ah. Tilmaamaha dib-u-hagaajinta iyo qaybaha dayactirka 10 sano. Sidan ayuu sharciga cusub leeyahay
2 Waxaas oo dhami waxay saamayn ku yeelan doonaan kharashka alaabada. Taasi waa, Apple waxay kordhin kartaa qiimaha aaladaha
Dammaanad saddex sano ah. Tilmaamaha dib-u-hagaajinta iyo qaybaha dayactirka 10 sano. Sidan ayuu sharciga cusub leeyahay
Sharcigu ma dhaqan galayo illaa Janaayo 1 ee 2022 in kastoo horey loogu daabacay BOE. Sharcigani wuxuu u hogaansamayaa shuruudaha reer Yurub mana aha oo kaliya inuu tilmaamayo in muddada dammaanad qaadka ee alaabooyinka cusub ee la soo iibsaday ay tahay in lagu kordhiyo illaa 3 sano, iyadoo laga xisaabtamayo xilliga la keenayo alaabada. Intaas waxaa sii dheer, Apple waxaa looga baahan doonaa inuu haysto qalab dayactir ah aaladda ugu yaraan 10 sano, oo uusan aheyn shantii loo baahnaa illaa iyo hadda. Waxaan ka fikirayaa hadda haddii aysan jirin wax lagu deg dego in qalab gaar ah la iibsado, waxaan sugi karnaa sanadkaas cusub.
Weli wax badan ayaa jira. Muddada ayaa la kordhiyay si ay uga baxdo wax soo saar aan shaqeynin iyo in macaamilku uusan soo bandhigin cilladda. Ilaa hadda waxay ahayd lix bilood, muddada ayaa la kordhiyay ilaa LABA sano.
Soo Koobid: Xeerka cusub ee ficil ahaan wuxuu kordhinayaa xuquuqda helitaanka xalka laba illaa saddex sano, ha ahaato dayactirka ama beddelkiisa. Kahor, waxaad haysatay lix bilood si aad uga fogaato inaad caddeyso in badeecada ay dhacday, iyadoo loo maleynayo in cillad xagga warshaddu jirto. Hadda waqtigaasi wuxuu noqonayaa laba sano. Laga bilaabo halkaas, inta lagu jiro sanadka saddexaad, shirkaddu waxay dalban kartaa fikrad khabiir labaad.
Maxaa loogu yeedhay tilmaanta dayactirka (wax aan hore u qabtay iFixit oo leh alaabada Apple): Qiimeynta laga bilaabo 0 illaa 10 si loogu fududaado beddelidda qaybaha ama kala-goynta. Tixraac horey loogu isticmaalay Faransiiska tan iyo bilowgii sanadkan, laakiin meesha Spain gudaheeda aan weli lagu shaacin goorta ay bilaabi doonto inay codsato. Soo-saareyaashu sidoo kale waa inay lahaadaan qalab dayactir ah oo la heli karo ugu yaraan 10 sano, laba jeer shanta sano ee hawlgabnimadooda sharcigu qabo. Haddii uu Mac joojiyo soosaarkiisa sannadka 2021, waxaa jiri doona oo keliya qaybo illaa 2026 laakiin haddii ay joojiso soo saariddiisa bisha Janaayo 1, 2022, illaa 2032 waxaan haysan doonnaa qalab dayactir ah. Taasna waxaa leh iPhone, iPad, gaariga, mashiinka dharka lagu dhaqo ... iwm.
Waxaas oo dhami waxay saamayn ku yeelan doonaan kharashka alaabada. Taasi waa, Apple waxay kordhin kartaa qiimaha aaladaha
Waxay ku xiran tahay iibiyeyaashu inay daryeelaan kharashyada si dhammaan waxyaabaha kor ku xusan ay yihiin kuwo la awoodi karo oo macaamiisha ay ku gaari karaan. Sidoo kale waa inay bilaash noqotaa. Tani waxay ka dhigan tahay inay noqon doonto nooca go'aaminaya haddii kor loo qaadayo iyo in kale qiimaha alaabooyinka. Taasi waa in la yiraahdo, sida had iyo jeer, haddii dhammaan kharashyadan cusub ee shirkaddu ay ku dhacaan macaamilka ugu dambeeya ama haddii loo maleeyo kiiskan inaan danaynayno, Apple. Kharashaadka si cad ayey usii kordhayaan.
Hadda, way cadahay in kordhinta dammaanadda ay saameyn ku yeelan karto sicirka, laakiin taasi waxay noqon laheyd qodob yar iyo Waa in aynaan ogaan farqiga u dhexeeya qiimaha 2022 iyo 2021.
War wanaagsan markaa. Waa inaan sugnaa ilaa 2022 si aan u soo iibsano badeecooyinka Apple-ka kuwaas oo badanaa qaali ah oo dayactirkoodu adag yahay. Ku dar iMac cusub oo leh M1 waa u qalantaa sugitaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Sharciga cusub ee kordhinta dammaanadda wuxuu saameyn badan ku leeyahay Apple (iyo inta kale).
Boos sii u fur iMac 24-inch cusub ah
Qaar ka mid ah midabada iMac cusub ayaa laga heli karaa oo keliya khadka tooska ah